သာ. အရေးကြီးသောအရာဟူမူကား, ပိုကျဘျဆိုကျယာဉ်အသွားအလာကိုဆညျးပူးသို့မဟုတ်ရှိရင်းစွဲယာဉ်အသွားအလာပြောင်း?
ဒီ post ကိုဖတ်ရှုခြင်းကသင့်ဘလော့ဂ် (သို့) ၀ ဘ်ဆိုဒ်ကလက်ရှိပေးနေတဲ့ ၀ င်ငွေကိုတိုးမြှင့်ဖို့အတွက်သင်ဟာထိရောက်တဲ့နည်းလမ်းအချို့ကိုရှာဖွေနေတယ်ဆိုတာကိုပြသနေတယ်။ အိုကေ၊ ဒီဆိုဒ်ပိုင်ရှင်အများစုနှင့် ပါတ်သက်၍ ပုံရသည် - ဘတ်ဂျက်အကန့်အသတ်နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဝင်ငွေရရှိရန်အတွက်အရင်းအမြစ်များနည်းပါးသည်။
သင့်ရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကျွမ်းကျင်မှုကိုပိုမိုနက်နက်နဲနဲအသုံးချခြင်းဖြင့် ၀ င်ငွေရရန်မပြည့်စုံသေးသောအိပ်မက်ရှိပါသလား။ ကောင်းပြီ, Dropshipping စစ်မှန်စွာသင့်ရဲ့ e-commerce စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်စံပြနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းသည်အမှာစာတင်ပို့ခြင်း၏ဖိစီးမှုကိုဖယ်ရှားပေးပြီးသင်၏အကောင်းဆုံးကိုမည်သည့်နေရာတွင်ပေးနိုင်သည်ကိုသင်အာရုံစိုက်စေသည်။
Dropshipping နှင့်တွဲဖက်ရောင်းဝယ်ခြင်းသည်အွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်သူတို့၏စီးပွားရေးကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသိပညာရရှိရန်အတွက်ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုဖြစ်သည်။ dropshipping သည်သင်စျေးနှုန်းသတ်မှတ်သည်နှင့်တပြိုင်နက်တွဲဖက်ရောင်းဝယ်မှုကိုပြုလုပ်ရန်ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူကသင့်ကိုယ်စားစာရင်းမှပစ္စည်းများကိုသင့်ကိုယ်စားတင်ပို့ပေးသည်။
တစ်အောင်မြင်သောဘလော့တည်ဆောက်ခြင်းများအတွက်အဖြေဖို့4မေးခွန်းများ
demandmetric.com ၏အဆိုအရလူ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းသည်ကြော်ငြာများအစားဘလော့ဂ်များမှတစ်ဆင့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုအကြောင်းလေ့လာလိုကြသည်။ ထို့အပြင် ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းသောလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းသည်ဤကဲ့သို့သောသင်ယူမှုအတွက်စိတ်ကြိုက်အကြောင်းအရာများကိုပိုမိုနှစ်သက်ကြောင်းကောက်ချက်ချခဲ့သည်။ စိတ်တိုင်းကျပါဝင်သောစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းဆိုသည်မှာဖောက်သည်တစ် ဦး နှင့်ဆက်သွယ်မှုဖြစ်စေသောပုံပြင်မျှဝေခြင်းကိုဆိုလိုသည်။
ရက်အနည်းငယ်အတွင်းသင်၏အဘလော့မှယာဉ်အသွားအလာတိုးမြှင့်မှုအတွက်5ရိုးရှင်းသော Tweaks လုပ်တယ်ဆိုတာတကယ်တော့
အိုကေ၊ သင်ဟာသက်ဆိုင်ရာ၊ အမြင်အာရုံနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းပြီး၊ မျှဝေရန်ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ရှိပြီးကြယ်တာရာများကိုစတင်ထုတ်ဝေပြီးပြီ ဖြစ်၍ သင့်ကို visitors ည့်သည်များစွာခေါ်ဆောင်လာခြင်းမရှိဟုထင်ရသည်။ သင်သည်သင်၏ဘလော့ဂ်ပေါ်တွင်ဤကဲ့သို့သောအကြောင်းအရာများကိုပင်ပုံမှန်တင်နေသည်၊ သို့သော်အသွားအလာသည်အလွန်စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းသည်။
ဂူဂဲလ်၏ပထမဆုံးစာမျက်နှာတွင်ဆိုဒ်တစ်ခုကိုအဆင့်သတ်မှတ်နိုင်အောင်ပေါင်းထည့်ထားသောဒြပ်စင်များသည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်ပိုင်ရှင်များအတွက်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်များစွာသောလူတို့အား၎င်းတို့၏ဒေါ်လာများကိုအော်ဂဲနစ်အသွားအလာ ၀ ယ်ရန် (သို့) သူတို့၏ဗီဒီယိုများကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ရန်ဖြစ်စေခဲ့သည် ပထမဆုံး SERP (၁၀) ခုတွင်သင်ပေါ်ပေါက်လာစေသည့်အကြောင်းအချက်တစ်ခုမှာ backlink ဖြစ်သည်။
လူတိုင်းကသူတို့ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလူကြိုက်များအောင်လုပ်ချင်တယ်၊ အကြိုက်တွေပိုများလာတယ်၊ share လုပ်တယ်၊ အကြောင်းအရာစျေးကွက်တွင်အောင်မြင်မှုရရန်သင်အရည်အချင်းပြည့်မီရန်အတွက်သင်သည် visitors ည့်သည်များကိုဆွဲဆောင်ရုံသာမက၎င်းတို့ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပြီးနောက်ဆုံးတွင်၎င်းတို့ကိုအလားအလာရှိသောဖောက်သည်များဖြစ်စေရန်လိုအပ်သည်။ အတော်များများ ...
လူတိုင်းအင်တာနက်နှင့်ကွန်ပျူတာပစ္စည်းများကိုစဉ်းစားသည့်အခါတိုင်း Mark Zuckerberg သို့မဟုတ် Bill Gates ဖြစ်လိုကြသည်။ နှစ်များတစ်လျှောက်အင်တာနက်သည်ပညာပေးစင်တာတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အနှစ်တစ်ရာကျော်ကာလတွင်ဘောလုံးသည်အခြားတစ်ဖက်သို့လှိမ့်ဝင်နေပုံရသည်။ အနှစ်တစ်ထောင်ကျော်ကခုန်နေပုံရသည်
ဝက်ဘ်ဆိုက်ပိုင်ရှင်များသည်အရည်အသွေးအသွားအလာကိုဖန်တီးရန်သူတို့၏ကြိုးပမ်းမှုများကိုမကျေနပ်ကြပါ။ အခြားသူများကမူကြော်ငြာကိုကြိုးစားပြီးများပြားသောလမ်းကြောင်းကိုရရှိရန်ကြိုးစားခဲ့ကြသော်လည်း၎င်းကိုစိတ်ချရသောစိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသော ၀ က်ဘ်ဆိုက် visitors ည့်သည်များအဖြစ်မည်သို့ပြောင်းလဲရမည်ကိုမသိကြပါ။ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကို ၀ ယ်ဖို့တောင်ကြိုးစားခဲ့ဖူးတယ်။